Indawo entle eneBalcony View entle kunye neSauna
IMont Peace ligumbi elahlukileyo kwindalo ecocekileyo. Yindawo engqongwe ziintaba zeBjelasica ezinesauna yaseFinnish kunye nebalcony. Eli khaya lithandekayo linendawo yokuphumla enika izinto ezintle ukuze iindwendwe zizonwabele. Yindlu eyahluliweyo yendawo yokuhlala enemithi eyenziwe ngamaplanga ekwiikhilomitha ezi-5 kuphela ukusuka kwidolophu yaseKolasin, i-250 m ukusuka kwindlela enkulu yeMacadam. Indawo yokuhlala imalunga ne-55 m2 kwaye inegumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, ikhitshi, igumbi lokuhlambela, amagumbi amabini okulala, kunye nentenetya yetafile.
Indawo yethu ikwilali yaseMusovica Rijeka. Ngaphambi kwendlu, kukho indlu ekufutshane nawe, apho uhlala khona ababuki zindwendwe bakho. Unokunkqonkqoza emnyango kwaye ucele naluphi na uncedo xa ulufuna. Kukho imarike kumgama oziikhilomitha ezi-5 ukusuka kule ndawo. Indawo yokutyela yokuqala iku-2km kude kwaye ibonelela ngokuziswa kokutya kwakhona.
Iziko le-Ski i-Kolasin 1450 yi-5 km kude nathi.
Ngexesha lokuhlala kwakho, kuya kuhlala kukho umntu ovela kusapho lwam (umama, udadewethu, okanye mna) wokukunceda kwaye enze ukuhlala kwakho ukhululekile kangangoko ngalo lonke uncedo kwisiza okanye ngefowuni ephathwayo.